Nestle NaturNes Bio Banana Pumpkin uye Karoti 90G 4M + - ASFO Chitoro
Nestle NaturNes Bio Banana Rungu ...
Nestle NaturNes Bio Banana Pumpkin uye Karoti 90G 4M +
NaturNes Bio Pumpkin Banana Karoti inzira inoshanda yekupa yakasarudzika musanganiswa wemichero nemiriwo kumwana wako uye ndokuendesa kwese. Inokodzera vacheche kubva pamwedzi mina uye mune yega fomati 4g, ine michero nemiriwo yakasimwa, kurimwa uye kusarudzwa kunyanya kudyiswa kwevana.
Zvibereko nemiriwo yemucheche NaturNes Bio Pumpkin Banana Karoti isarudzo huru yekutanga kuunzwa kwemubatanidzwa wemichero nemiriwo muzvikafu zvevacheche uye fomati yepaketi inokutendera kuti uendese kwese kwese. Iko kurongedza kwakagadzirwa zvakanyanya kukurudzira vacheche vakura kuti vadzidze kudya vega zvakananga kubva mupakeji. Yakagadzirwa nemuchero michero uye miriwo yemhando yepamusoro, yakarimwa uye yakasarudzwa kunyanya kune chikafu chevana uye isina mavara ekugadzira kana zvinodzivirira *.
Iyo packet NaturNes Bio Pumpkin Banana Karoti inzira yakaenzana uye inoshanda yekuendesa zvakanakira michero nemiriwo kumwana wako chero nguva chero kupi. Pasina shuga yakawedzerwa, iine mashuga anongoerekana aitika mupakeji rimwe nerimwe NaturNes Bio rakaenzana neiri kushumirwa michero, ichipa hunyoro hwakatsetseka uye hwema hunonaka kugutsa marati anonzwisisa zvakanyanya!
Nekuzvipira kupa zvigadzirwa zveberekero kwakatangira, yakagadzirwa michero uye miriwo kuna NaturNes Mucheche Bio Pumpkin Banana Karoti, yakagadzirwa nemapungu puree, bhanana uye karoti, 100% mabviro ehupenyu.